Uludağda Kar Kalktığında Çalışmalar Başlıyor | RayHaber | raillynews
HomeGeneralỌrụ amalite mgbe Snow na-ebili na Uludağ
17 / 01 / 2012 General, TELPHER
Ekpebiri ọgba aghara nke ikike na Uludağ site na nkuzi nke Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan. Onye isi obodo Mayor Recep Altepe kwuru na mgbe snow chapuru na Uludağ, ọrụ ahụ ga-amalite ngwa ngwa. "Uludağ chọrọ mmasị na ikike. Bursa nwere ọchịchị ime obodo siri ike. Akụ anyị dị njikere maka Uludag. Oge anyị dị obere. Anyị na-atụ anya mbido ngwa ngwa na nnọkọ ahụ. Paswọọdụ anyị bụ iweta Uludağ na Bursa ”.
Onye isi obodo Bursa Metropolitan Recep Altepe, Uludag bụ otu n'ime ihe ịtụnanya okike dị mkpa nke Bursa, na-ekwupụta na mgbe e nwesịrị ikike, na ha ga-amalite ime ihe dị iche a kwadebere maka Uludag, ka o kwuru. Onye isi ala Altepe, ọrụ ahụ ga-amalite mgbe ewepụsịrị snow, o kwuru. N'ikwu na Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan na-arụ ọrụ iji weta Uludağ ruo ebe o kwesịrị, Altepe kwuru na Uludağ, otu n'ime ụdị nkwado Bursa bụ otu n'ime ugwu kachasị mara mma nke ụwa wee sị, X 7 cra cra lake lake , isi iyi, creeks na plateaus. Ọ nwere ezigbo ọmarịcha mpaghara. Pasent 47 nke Bursa nwere mpaghara ọhịa. Ebe a kacha mara amara bụ Uludağ ..
TEK ULUDAĞ NA AKW ONEKWỌ INB ANDR AND NA AKW ANDKWỌ NA AKW ”KWỌ ”
N'ikwu na Prime Minista Recep Tayyip Erdoğan na-akwado Uludağ dị ezigbo mkpa, Altepe kwuru, sık Anyị na-ekwukarị banyere nhazi na Uludağ n'oge usoro ịhe ngosi nke Obodo anyị. Mgbe m zutere praịm minista, anyị na-ekwu maka Uludağ mgbe niile. Otu n'ime isiokwu anyị kachasị mkpa bụ Uludağ. Anyị kwesịrị irite uru site na Uludağ n'ụzọ akụ na ụba. Naanị oge mgbụsị akwụkwọ oge ezumike 2,5 kwa ọnwa ezughị. Uluda bụ ụlọ egwuregwu kachasị ewu ewu n'oge oyi. Mana ọ bụ iwu imeghe Uludağ na ọnwa 12 nke afọ. enweghị ọtụtụ atụmatụ, dị ka skai resotu nke Uludag na Turkey Uludag 'nso anyị bed ike 10 puku. Nke a bụ etiti dị mkpa. Uludag kwesịrị ime ka ọnụego ụlọ obibi nke Bursa dịkwuo elu. Kedu ihe Uludağ chọrọ? Uludag chọrọ ikike chọrọ ikike. Maka anyị, ọ bụ agbata obi. A ga-ekpochapụ adịghị ike nke nha ahụ. E kwesịrị imekwukwa mmasị ahụ ..
N'ikwu hoo haa na ụkọ akụrụngwa na nkwenkwe ụgha na Uludağ, Altepe gara n'ihu dịka ndị a:
Hipgbọ mmiri Ọ nwere adịghị ike dị mkpa. Ndị ọchịchị obodo kwesịrị ịbanye ebe a ma ọ bụrụ na emebie njem njem ma belata mmiri. Shouldnye kwesịrị ịgbawa ọwa mmiri? N’ezie, Obodo Obodo kwesiri ịrụ ọrụ a. Bursa kwesiri ime ihe banyere nsogbu ya. Ya mere nsogbu ndị dị ebe a, Obodo ukwu, onye isi obodo Osmangazi na Gọvanọ kwesịrị idozi. Anyị chọrọ ihe maka nke a. ”
NWAANY PR ANYA NA ANA EGO NA ANKARA
Minister nke oke ohia na mmiri Veysel Eroğlu'nun Uludağ maka mbibi nke ụlọ abụọ nke ọnwa 4 gara aga chetara na Altepe Altepe, Minista Eroglu kwurịtara nsogbu nke ikike na Uludag. Altepe kwuru, konusunda Onye ụkọchukwu anyị kwadokwara ndị isi obodo ukwu na mpaghara a. Anyị letara Minista Eroglu na Ankara izu gara aga na Tọzdee. Anyị nwere mkparịta ụka iji merie nsogbu nke ikike na Uludağ. Ministri na steeti enweghị ike ikwado maka akụrụngwa niile na ọrụ nkwenkwe ụgha sitere na nsị mmiri na ebe a na-adọba ụgbọala. Ọrụ Uludag metụtara 'anyị na-eme' anyị kwuru. Ọ bụchaghị na anyị 'mere' ọ nweghị ihe o kwuru. Onye obula n’eme ya, ka anyi weta Uludağ na Bursa. Ka a hụ Uludağ dị ka etiti dị mkpa ma enweghị nsogbu ma ọ bụ ọgba aghara ọ bụla
“Anyị ga-amalite ngwa ngwa na ULUDAĞ”
Altepe kwuru na ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ ndị dị na Uludag edozila nsogbu nsị na mmiri mmiri n'onwe ha nakwa na a ga-eme nhazi na Uludag mgbe ewepụsịrị snow. Altepe, “Enweghị akụrụngwa na ozuzu ezughi oke na Uludağ. Ekwesịrị ịhazi nza. Ugbo ala ekwesịghị abanye na họtel ahụ. Kedu ihe kpatara ebe a dị ka ọnwa 12 nke afọ
isi nwale? Onye ụkọchukwu anyị agwala anyị na anyị ga-eme nke a. Emere ogbugba ndu na akụrụngwa. Ugbu a onye ụkọchukwu anyị ekwuola na ya ga-akwado ya. Uludag kwesiri inweta ihe kachasị mma. Mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị, onye isi njikwa anyị ga-abịa Bursa. Mgbe ọ bịarutere, anyị ga-arụcha ọrụ a. Mgbe snow bidoro, anyị ga-arụ ọrụ siri ike. Oge ọrụ anyị adịghị obosara. Snoo nwere ike ịmalite n’Ọktọba. Snoo dịgidere ruo Eprel. Site na mmalite ngwa ngwa na ọmarịcha ọrụ, anyị na-agba mbọ ịrụ ezigbo ọrụ na Uludag naanị obere oge. Paswọọdụ anyị bụ iweta Uludağ na Bursa ”
“ANY KNOW MAARA ANYA KA ANY DO Na-eme”
Altepe rụtụrụ aka na itinye ego nke obodo mụbara site na itinye ego na Erzurum ma mesie ya ike na enwere ọrụ ndị mara mma maka Uludağ. Altepe, na-echetara oru ngo ugbo ala nke USB, kwuru, sị: “Ihe akụrụngwa nke obodo a kwesiri ka ọ bụrụ njem ya na Uludağ njem. Ihe oru ugbo ala nke USB anyi di n’etiti. Na-arụ ọrụ na-aga n’ihu. Cablegbọ ala USB ga-ebufe njem ga-adaba adaba na Uludağ Hotels. Na mgbakwunye, a ga-ekiri mbara ala Uludağ nwere iko zuru oke na nlele Bursa. Uludag ga-ahụ ọtụtụ ebe mara mma. Ugbo ala agha abanyeghi n’etiti udu mmiri n’oge udu mmiri na Uludag. Anyị maara kpọmkwem ebe anyị ga-arụ ọrụ ahụ. Anyi echebara ihe a echiche. A ga-edochi ndị a ngwa ngwa. Onye ọ bụla ga-eme òkè nke ha. Onye Minista ahụ kwadokwara ọrụ a. Enwere otutu omumu nke ozi anyi doziri ”.
“NJE NA YAYLA NWA ANYI GARARA
Na-ekwu na ha chọrọ isonye na nro ma na-atụnye ụtụ obodo na ọkọchị na udu mmiri, Altepe kwuru:
“Anyị ga-ahụta ezigbo ọrụ na Uludağ. Gini mere inwe nzukọ ndi ama ama na Uludag? Udiri Uludag ga-abawanye. A ga-ehibe mpaghara sọdọtin ọhụrụ. Alaçam, ọkachasị na mpaghara na plateau njem mmiri na Uludag ga-enwetaghachi. Njem nlegharị anya ga-agbatị na mpaghara ndị a. Enwere ọchịchị ime obodo dị ike ebe a. Enwere akụ, ka anyị mee ya ozugbo enwere ike. Anyị ga-eme ihe atụ kachasị mma na Uludağ na Uludağ. ”
Otutu ezumike ezumike na Uludağ: Mmiri snow na abawanye
Mmiri Oké Mmiri na Uludağ Rutere 260 Centimeters, Ụgbọ Ụgbọala Na-arụghị Ọrụ
Mmiri nke snow Uludağ ruru 120 centimeters
Uzuağ snow thickness 185 centimeters
Uludağ Egwu Na-eru Na 2 Meter
Mmiri snow na Uludağ karịrị 140 centimeters
Mmiri Na-ekpo Ekpo na Ndagwurugwu nke 160
Uzuağ snow thickness 150 cm
Mmiri snow na Uludağ na-abata na 2 mita
Mmiri nke snow Uludağ ruru 10 centimeters
Mmiri snow karịrị 2 mita na Uludağ
Uzuağ snow thickness ruru 2,5 mita
Uzuağ snow thickness ruru 2,8 mita
Mmiri Oke Na-acha Igwe Mmiri 2 Meter
Mmiri snow na-ebili na Uludağ
Ebe mbụ maka ụgbọ mmiri nke Marmaray dị na Kadıköy
Balıkesir Deputy Cemal Öztaylan: Andır Bandırma Ga-abụ World's Energy Corridor Balıkes